क्रिसमसमा किन सान्टाक्लस बन्दै बच्चा भेट्न अस्पताल पुग्छन् ओबामा ?
अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति बराक ओबामा उपहारले भरिएको कुम्लो बोकेर बालबालिका भेट्न अस्पताल पुगेका छन् । बुधबार दिउसो वासिङटन डिसिमा रहेको चिल्ड्रेन्स नेशनल हस्पिटल पुगेका ओबामाले ल्याएको उपहार उपचाररत बालबालिकालाई बाँढेका थिए ।
सान्टाक्लसले लगाउने रातो फ्लपी टो्पी लगाई अस्पताल पुगेका उनले उपचाररत बालबालिकालाई क्रिसमस गिफ्ट भन्दै उपहार बाँढेका थिए । पूर्व राष्ट्रपतिको यो कार्य देखेर उपचाररत बालबालिका र तिनका अभिभावक मात्रै होइन अस्पतालका चिकित्सक नर्स तथा कर्मचारी समेत आश्चर्यमा परेका थिए ।
करीब ९० मिनेट अस्पतालमा बिताएका ओबामाले विरामी बालबालिकालाई उपहार मात्रै दिएनन् ।उनीहरुसंग फोटो खिचाए, गीत गाँउने नाच्ने र क्रिसमसको सेलिब्रेसन समेत गरेका थिए । सोही अवसरमा उनले विरामी बालबालिकाको आफन्त, चिकित्सक, नर्स तथा अस्पतालका पदाधिकारीहरु सित उपचार तथा अस्पतालको सेवाको बारेमा कुराकानी गरेका थिए ।
उनले विरामी र तिनका अभिभावकलाई सहानुभूति समेत दिएका थिए । अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले भारी बोकेको तस्बिर र भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। अमेरिकी मिडियाको अनुसार पूर्वराष्ट्रपति ओबामाले धोक्रो बोकेर क्रिसमसको अवसरमा बालबालिकालाई उपहार बाँड्न वासिङ्टन डिसीस्थित चिल्ड्रेन्स नेशनल हस्पिटल पुगेका हुन्।
वासिङ्टन पोस्टले लेखेको समाचार अनुसार सान्ता क्लजले लगाउने पहिरनमा पूर्वराष्ट्रपति ओबामालाई भारी बोकेको देखेर अस्पतालमा रहेका व्यक्ति आश्चर्यचकित परेका थिए। उनले त्यहाँ उपचारत बालबालिकासँग सेल्फी खिच्न समेत भ्याए र अभिभावकलाई सहानुभूति दिए। ओबामाको उक्त कार्यले चौतर्फी तारिफ पाएको छ।
को हुन् ओबामा ?
बाराक हुसेन ओबामा (जन्म: ४ अगस्ट, १९६१) अमेरिकाका ४४औं राष्ट्रपति हुन्। उनी यस देशका प्रथम अश्वेत (अफ्रिकी अमेरिकी) राष्ट्रपति हुन्। उनले २० जनवरी, २००९ का दिन राष्ट्रपति पदको शपथ ग्रहण गरेका हुन्। ओबामा इलिनोइ राज्यबाट कनिष्ठ सेनेटर तथा २००८ मा अमेरिकाका राष्टपति पदका लागि डेमोक्र्याटिक पार्टीका उम्मेद्वार थिए। ओबामाले हार्भर्ड ल स्कुलबाट सन् १९९१ मा स्नातक गरे, जहाँ उनी हार्भर्ड ल रिभ्यूका प्रथम अफ्रीकी अमेरिकी अध्यक्ष पनि भए। सन् १९९७ देखि २००४ सम्म इलिनोइ सेनेटमा तीन सेवाकाल पूरा गर्नुअघि ओबामाले सामुदायिक आयोजकको रूपमा काम गरे अनि नागरिक अधिकार अधिवक्ताका रूपमा प्रेक्टिस गरे।
१९९२ देखि २००४ सम्म उनले शिकागो कानुन विश्वविद्यालयमा संवैधानिक कानुनको अध्यापन कार्य पनि गरे। सन् २००० मा अमेरिकी हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभ सीट हासिल गर्न असफल भएपछि जनवरी २००३ मा उनको नजर अमेरिकी सेनेटतर्फ पर्‍यो जहाँ उनले मार्च २००४ मा प्राथमिक विजय प्राप्त गरे र नोभेम्बर २००३मा सेनेटका लागि निर्वाचित भए ।
१०९ औं कंग्रेसमा अल्पसंख्य डेमोक्रेट सदस्यका रूपमा उनले पारम्परिक हात-हतियारमाथि नियन्त्रण तथा सङ्घीय कोषको प्रयोगमा अधिक सार्वजनिक उत्तरदायित्वको समर्थन गर्दै विधेयक बनाउनमा सहयोग गरे। उनी पूर्वी युरोप, मध्य पूर्व र अफ्रिकाको राजकीय यात्रामा पनि गए।
११० औं कंग्रेसमा लबिइङग तथा चुनावी धाँधली, मौसम परिवर्तन, नाभिकीय आतंकवाद तथा युद्धबाट फर्किएका अमेरीकी सैनिकहरूको कल्याण सम्बन्धित विधेयक-निर्माणमा उनले सहयोग गरे। विश्व शान्तिमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याए बापत बराक ओबामालाई वर्ष २००९ को नोबेल पुरस्कार प्रदान गरियो ।
जन्मेको एक महिनामा छाडेर गएका बाबुसँग ओबामाको अलि ठूलो भएपछि एक पटक मात्र भेट भएको थियो। बाराकका जन्मदिने पिताको सन् १९८२ मा गाडी दुर्घटनामा निधन भयो। बाराक दश वर्षको हुन्जेल इन्डोनेसियामै बसे। त्यसपछि आमापट्टिका हजुरबुबा स्टानले र हजुरआमा मेड्लिनसँग बस्न होनोलुलु, हवाई राज्य फर्के। उनी सन् १९७१ मा पुनाहोउ स्कूलमा कक्षा ५ मा भर्ना भए। सन् १९७९ मा स्नातक तह सके। डेमोक्र्याटिक पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रपति बनेका ओबामाले कोलम्बिया युनिभर्सिटि र हार्भर्ड ल स्कूलबाट स्नातक गरेका छन् !
होनोलुलुमा जन्मेका ओबामा केन्याई मूलका अश्वेत बाबु र अमेरिकी मूलकी आमाका सन्तान हुन्। उनको अधिकांश प्रारम्भिक जीवन अमेरिकाको हवाई राज्यमा बित्यो। ६ देखि १० वर्षसम्मको उमेर उनले जकार्ता (इण्डोनेशिया)मा आफ्नी आमा र इण्डोनेशियाई सानोबाबु (सौतेलो बाबु) सँग बिताए। बाल्यकालमा उनलाई बैरी नामले बोलाइन्थ्यो। पछि होनोलुलु फर्केपछि आफ्नो मावल घरमा बस्न थाले। १९९५ मा उनकी आमाको क्यान्सर रोगको कारणले मृत्यु भयो। ओबामाको विवाह १९९२ मा मिसेलसित भएको हो जसबाट दुई छोरीहरू (मालिया र साशा) भए। ओबामालाई बाल्यकालमा लालन-पालन गर्ने हजुर आमा (मेडलिन दुनहम)को पनि २ नोभेम्बर, २००८ का दिन ८६ वर्षको उमेरमा निधन भयो।
हार्भर्ड ल स्कूलबाट सन् १९९१ मा स्नातक गरेका ओबामाले दुइवटा लोकप्रिय पुस्तकहरू पनि लेखे। उनको पहिलो पुस्तक- ड्रीम्स फ्रम माई फादरः अ स्टोरी अफ रेस एन्ड इन्हेरिटेंसको प्रकाशन ल (Law) स्कूलबाट स्नातक गरेको केही दिनपछि गरिएको थियो। यस पुस्तकमा होनोलुलु र जकार्तामा बितेको उनको बाल्यजीवन, लस एन्जलिस र न्यूयर्कमा बितेको कलेज जीवन तथा सन ८० को दशकमा शिकागो सहरमा सामुदायिक आयोजकको रूपमा उनले नोकरी गरेका दिनहरूका संस्मरण छन्।
पुस्तकमा आधारित आडियो बुकलाई सन् २००६ मा प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कारले सम्मानित गरियो। उनको दोस्रो पुस्तक द अड्यासिटी अभ होप मध्यावधि चुनावको तीन साताअघि अक्टोबर २००६ मा प्रकाशित भयो। छोटो अवधिमा नै यो पुस्तक बेस्टसेलर सूचीमा सामेल भयो। शिकागो ट्रिब्यूनका अनुसार पुस्तक-प्रचारको बेला मानिसहरूसित भेट-घाटको प्रभावले पछि गएर ओबामालाई राष्ट्रपति पदको चुनावमा उत्रिने हौसला मिल्यो।
५ जून, २००८ का दिन ओबामाको उम्मेद्वारीको समर्थनमा उनका डेमोक्र्याटिक प्रतिद्वन्द्वी तथा पूर्व प्रथम महिला हिलेरी क्लिन्टनले आफ्नो दावेदारी छोडिदिने तय भइसकेको थियो । अमेरिकी इतिहासमा ओबामा केवल पाँचौं अफ्रिकी अमेरिकी सेनेटर मात्र नभएर उनी मतदानद्वारा चुनिएका तेस्रा अनि सेनेटमा नियुक्त एक मात्र अफ्रिकी अमरिकन सेनेटर पनि हुन्।
ओबामा सन् २००८ नोभेम्बर ४ को निर्वाचनमा राष्ट्रपति निर्वाचित भए। सन् २००९ जनवरी २० देखि ४४ औं राष्ट्रपतिका रूपमा कार्यभार सम्हाले। त्यसअघि उनी इलिनोइ राज्यका सेनेटर थिए। अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचित हुने उनी पहिलो अश्वेत हुन्। यो चुनावमा बाराक ओबामाले ५२ प्रतिशत मत पाए भने विपक्षी जन मकेनको पक्षमा ४७ प्रतिशत मत परेको थियो।
त्यस्तै सन् २०१२, नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनमा आफ्ना निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी, रिपब्लिकनका मिट रम्नीलाई हराउँदै पुन: दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भए। धेरै पहिले अमेरिकामा काला जातिका मानिसलाई दासदासी राखिन्थ्यो। उनीहरूको किनबेच हुन्थ्यो। काला जातिका मानिसका मानिस बेचिनेदेखि राष्ट्रपतिसम्म पुग्नु ठूलो उपलब्धि हो। ठूलो प्रजातन्त्र अमेरिकाको सुन्दरता पनि यही हो।
ओबामाको वाल्यकालका धेरै दिन हजुरआमासँग बित्यो।त्यसैले उनको जीवनमा सबभन्दा बढी नजिक पनि हजुरआमा नै थिइन्। तर उनी राष्ट्रपति भएको खबर सुन्न दुई दिन बाँकी हुँदा हजुरआमाको निधन भयो। 'कसरी सपना देख्ने र कडा परिश्रम गर्ने भन्ने मैले आमा र हजुरआमाबाट सिकेको हुँ' भन्ने ओबामाले हजुरआमा-हजुरबुबा दुवै जना आफ्नो जीवनको 'पथ प्रदर्शक' भएको बताउँछन्। नाममा हुस्सेन भए पनि उहाँ इसाइ धर्म मान्छन्। उनी राष्ट्रपति भएर ह्वाइट हाउसमा बस्न जानुअघि इलिनोइ राज्यमा बस्थे। उनले राजनीति गर्न थालेको १९ वर्षमात्र भएको छ। यति चाँडो विश्वकै प्रभावशाली नेता हुनु आफैंमा ठुलो उपलब्धि हो।